Manangana hetsika manerantany
Miara-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana izahay mba hanamafisana ny fitantanana an-dranomasina eo an-toerana sy hamerina ny fiainana an-dranomasina manerana ny firenena 14.
Ny tontolo iainana an-dranomasina ao Belize dia mahafaoka ny sasany amin'ireo zavaboahary an-dranomasina manan-danja indrindra ao amin'ny Ranomasina Karaiba, anisan'izany ny haran-dranomasina midadasika, ala honko ary ny tontolo iainana ahi-maitso.
Any amin'ny lakandrano avaratr'i Mozambika no misy ireo nosy Kaomoro, faritra iray ahitana ny zavamananaina an-dranomasina faharoa avo indrindra eran-tany taorian'ny Coral Triangle.
Ny fomba fiasanay any Kenya dia mifantoka amin'ny fanamafisana ny Beach Management Units (BMUs) hanatsarana ny fitantanana ny jono.
Manohy miasa any India miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka maharitra amin'ny Dakshin Foundation izahay. Miara-miasa amin'ny toerana telo miavaka izahay; ny vondronosy Lakshadweep, ny faritra amorontsirak'i Odisha sy ny Nosy Andaman.
Ity firenena archipelagic ity dia manana morontsiraka lava indrindra - ary loharanon-jono amoron-dranomasina lehibe indrindra - amin'ny firenena rehetra eto an-tany. Ny XNUMX isan-jaton'ny vokatra hazan-dranomasina ao Indonezia dia avy amin'ny jono madinika.
Nanomboka teto Madagasikara tamin'ny taona 2003 ny dian'ny Blue Ventures, ary nanohana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana an-dranomasina manerana ny firenena izahay hatramin'izay.
Ny firenena lehibe indrindra ao amin'ny Faritr'i Pasifika Andrefana, ny haran-dranomasina sy ny honko any Papouasie-Nouvelle-Guinée dia isan'ny isan-karazany sy midadasika indrindra eran-tany.
Anisan'ny ivon'ny 'coral triangle' i Filipina ny fahasamihafan'ny zavamananaina an-dranomasina maneran-tany, miaraka amin'ny karazan-javamaniry an-dranomasina tsy manam-paharoa.
Miaraka amin'ny iray amin'ireo morontsiraka lava indrindra any Afrika, ny tontolo iainana an-dranomasina isan-karazany ao Somalia dia manohana ny fanjonoana any amoron-tsiraka sy any ivelany.
Tahaka ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ao amin'ny faritra mafana amin'ny zavamananaina an-dranomasina Mozambika Avaratra, Tanzania dia manana ny sasany amin'ireo tontolo iainana an-dranomasina isan-karazany indrindra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Nanomboka tamin'ny 2016, ny asantsika any Timor-Leste dia nivoatra ho hetsika mavitrika manohana ny fitantanana ny ranomasina sy ny fivelomana an-dranomasina any amin'ny firenena vaovao indrindra ao Azia.